/ Products / PCT Zvinodhaka
Isu tiri PCT Drugs powder suppliers, PCT Drugs poda kutengesa, Sezvatavimbisa, zvose zvePCT Drugs powder zvine tsvina kunze kwe98%.
PCT zvinodhaka powder
PCT zvinodhaka powder zvinoreva mushonga wePot cycle therapy. Post cycle therapy ndeye nzira yekushandisa zvinodhaka zvinoshandisa nzira dzakasiyana-siyana kuti dziende pamusoro pekuedza kusimbisa uye kudzorera mahomoni emushandisi kudzokera kune akangoita kamwechete apo kuderedza anabolic androgenic steroid cycle yapera.
Kamwe kana musikana akasiya kushandisa vanabolic androgenic steroids ivo vakasara mumamiriro ezvinhu apo maitiro avo echokwadi e testosterone ave akadzingwa, dzimwe nguva zvakaoma. Uyezve, mazinga e-steroid anoramba achiderera muhutano hwavo, achisiya mushumiri mune imwe nzvimbo yepamusoro yehurumende mushure mekufamba, iyo inogona kuratidzira mukukwanisa kwavo kuchengetedza misi miviri yakawanikwa panguva yekufamba. Nezvizvi mupfungwa, zviri nyore kugumisa kuti tinoda kuwana nzira yekudzorera michina yemichero testosterone kuti tive nehupenyu huri nani hwehutano hwakakwana uye kuchengetedza mishonga yemasumbu.
Clomiphene citrate (clomid powder) uye tamoxifen (nervadex powder) inogona kushandiswa mushure mekuita kuti ibatsire kudzorera vashandi 'zvekuberekwa kwe testosterone chaiyo. Nokuti vose vari vaviri vanogona kudzivisa isrogen pa hypothalamus uye pituitary, nokudaro kudzivisa kusagadzikana kwemashoko ekudzivirira, tine zvinodhaka zvinogona kubudirira kuwedzera FSH (follicle stimulating hormone) uye LH (luteinizing hormone) mumuviri wemurume. Kuwedzera kweHH kunogona kubatsira kukurudzira masero eLeydig mune ma testes kuti abudise testosterone yakawanda.
Vakawanda vanowana kungoshandisa nevodvadex powder pachayo zvakakwana zvakakwana kuti vadzoke kubva kumiganhu yavo. Vamwe, zvisinei, vanosarudza kushandisa zvose zvinodhaka kuti vavhare mairi ose. Zvakakosha kuziva kuti nervadex poeder inonyanya kukosha mukusimudzira kuwedzera kweHH, pane imwe yemamiriyoni kusvika kune imwegiramu, zvichienzaniswa neyemagetsi e-clomid. Uyewo, vashandi vazhinji vanonyunyuta nezvemigumisiro kubva ku-clomid powder zvakadai sekuonekwa zvinoonekwa uye mafungiro akachinja.
Dosages of nolvadex yePCT protocol:
Zuva 1 100mg
Kutevera 10 mazuva 60mg
Kutevera 10 mazuva 40mg
Izvo zviri pamusoro apa ndeyomuenzaniso weprotocol unogona kushandiswa. Zviri pachena kuti mhirizhonga pamwe nemimwe miganhu inogona kuchinja mazamu uye nguva yepoteri cycle protocol.
Sezvambotaurwa pamusoro, vashandisi vakawanda vanoda kushandisa zvose nervadex uye clomid powder mushure mokutenderera kusvika mavhiri ose.
Dosages of nolvadex powder uye clomid powder pamwe chete nePCT protocol:
Zuva 1 Clomid powder 250mg + Nolvadex powder 60mg
Kutevera 10 mazuva Clomid powder 100mg + Nolvadex powder 40mg
Kutevera 10 mazuva Clomid powder 50mg + Nolvadex powder 20mg
Iyi nzira inofanira kubudirira. Izvozvo zvakati, sekunyora kwevolvadex chete protocol, haisi kuiswa mumatombo. Zvimwe zvinodzvinyirira zvinongoda zvinoda madhigiri akakwirira kana nguva yakareba yekushandiswa kuunza zvinenge zvichidiwa.
Paunotanga PCT protocol inotarisana nemakemikari ayo akatungamirirwa mumutambo. Tarisa kumusoro steroid yose yawakashandisa panguva yako yekufamba mutafura yedu iri pasi, uye nyora mishonga iyo ine nguva yakatotanga kutanga zuva mushure mokunge uchingobhabhatidzwa. Izvi ndizvo zvatisingaiti PCT protocol apo pangangodaro inogona kunge iine mikana yakakwirira ye androgens muhurongwa, iyo inogona kuita kuti PCT ive dongo kusvikira mazamu akatsika.
Chikonzero Nei Muviri Wakagadzira Shandisa Clomid powder
Clomid powder ishoko rechiito reCommiphene Citrate uye inogadzirwa nesrogen. Iyo inorayirwa mishonga kuti ibatsire ovulation muchero kubereka vakadzi. Rimwe zita rinonzi Serophene.
Kazhinji vanabolic steroid, kunyanya i androgens, inokonzera kusagadzikana kwekuita kwemuviri we testosterone. Apo muiti wezvokugadzira anobuda steroid cycle, chimiro che testosterone chaiyo chiro uye mazinga e steroids anotorwa muropa ari kuderera. Izvi zvinosiya maitiro evanhu vane mahomoni: vanabolic hormone muropa rakakwirira, saka muviri uri muchechi catabolism, uye, semugumisiro, zvakawanda zvezviviri zvemuviri zvakagadziriswa panguva ino zvichange zvarasika.
MASHOKO anopa mhando yehupfu yakasvibirira yePCT mishonga yepoda, Tamoxifen Citrate / Nolvadex, Clomiphene citrate / Clomid powder, Exemestane / Aromasin, Fluoxymesterone / Halotestin, Anastrozole / Arimidex uye Letrozole / Femara. Iwe unogamuchirwa kutora izvo zvinyorwa zvitsva kubva kuAASRAW kuti udzivirire utano hwako.